Ny FAPBM dia manavao ny fanohanany ny valan-javaboahary ary ny fanampiany ny vondrom-piarahamonina mandritra ny taona 2021 | Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar
Ny andraikitray sy ny soatoavinay
Ny tale ny fanatanterahana
Ireo mpiara-miasa amin'ny FAPBM
Mifandraisa amin'ny FAPBM
Ny FAPBM dia manavao ny fanohanany ny valan-javaboahary ary ny fanampiany ny vondrom-piarahamonina mandritra ny taona 2021
Ny Fondation pour la Biodiversité et les Aires Protégées de Madagascar (FAPBM) dia nanolotra famatsiana mitentina 10 453 858 118 Ariary (2 735 722 USD) ho an’ny Vondron’ny Faritra Arovana eto Madagasikara (SAPM) ho an’ny taona 2021. Izany famatsiam-bola izany dia natao ho :
fanohanana ny asa fampandehanan-draharaha, ny asa fampandrosoana ary ny asa fiarovana ny zavaboahary eo anivon’ny faritra arovana 35, anisan’izany ny famatsiana isan-taona,
fiatrehana ny hamehana mety hiseho any amin’ny faritra arovana,
fanohanana ny fanovoana fahalalana ireo faritra arovana vaovao,
famatsiana fanoneran-pahasimbana tontolo iaianana na hoe “offset”, amin'ny faritra arovana iray (1),
fanohanana ny fanitarana ireo faritra arovana an-dranomasina amin’ny alalan’ny tetik’asa GEF 6 AMP (Global environnement Fund – Aires marines protégées/Tahirm-bola ho an’ny tontolo iainana eran-tany – faritra arovana an-dranomasina).
Nihena ny vola niditra tamin’ny faritra arovana noho fihanton’ny fivezivezena teto amin’ny firenena. Ny fizahantany dia anisan’ny loharanom-bola voalohany ho an’ny faritra arovana. Izany fepetra izany anefa dia ahiana hitohy amin’ny ity taona 2021 ity. Sahirana noho izany ireo mpitantana ny faritra arovana manoloana ny tsindry mihatra amin’ny zavaboahary.
Niakatra ny tahan’ny doro tanety teto Madagasikara tamin’ny taona 2020, araka ny fanadihadiana nataon’ny oniversiten’ny Helsinki. Ka teo anelanelan’ny volana martsa sy mey 2020, dia nitombo ny afo tamin’ny faritra arovana 29 amin’ny ireo 123. Ny 6 amin’ny izy ireo no tena niharana fahasimbana goavana, 
Mpanondrana antsokosoko sokatra ihany koa no tratra teo anelanelan’ny volana aprily sy jolay.
200 ha tamin’ny ala-honko no voaringitra tany Ambanja,
Nirongatra ihany koa ny fanamboarana arina fandrehitra sy fanapahana antsokosoko tao anatin’ny faritra arovana. Tany Bongolava, avaratra-andrefana, dia nitombo ireo lafaoro tsy ara-dalàna fanamboarana arina, niakatra ho 123 isa tamin’ny volana mey 2020, raha 53 izy ireo tamin’ny volana desambra 2019,
Ireo olona miaina akaikin’ny faritra arovana ihany koa dia niharan’ny vokatry ny hamehana ara-pahasalamana. Ny mpanao asa-tanana, mpanjono ary tantsaha, samy tsy afaka namonjy tsena. Noho ny tsy fahazahoan-dalana hivezivezy, dia voatery namarotra amin’ny ampahafolon’ny vidin-entana izy ireo tamin’ny faritra sasany.
Kanefa manoloana izany, dia niezaka hatrany ireo mpitantana ny faritra arovana sy ny fokonolona niaro ny valan-javaboahary.
Ny FAPBM dia manao antso avo ho famatsiana maharitra ny ezaka fiarovana ny zavaboahary eto Madagasikara: « Nihena 500 tapitrisa dolara amin'ny fidiram-bola tokony ho azo avy amin’ny fizahan-tany noho ny fikatonany sisin-tanin’i Madagasikara hatramin'ny volana Janoary 2020., araka ny vinavinan'ny ofisialy.. Ity tranga ara-pahasalamana ity dia nanasongadina ny tanjaky ny rafitra tahirim-bola FAPBM, saingy nanamafy ihany koa ny tsy fahafahany mamaly ny filan'ny SAPM rehetra. Ampio izahay hamatsy bebe kokoa ireo faritra arovana, holovain’ny taranaka aman-dimby” hoy Ramatoa Sahondra RAJOELINA, filohan'ny filankevi-pitantanana an'ny FAPBM. »
Hanamafy ny fanarahany ny vokatry ny famatsiam-bolany ny FAPBM amin’ity taona ity. Havaozina avokoa ny tondro mikasika ny fitantanana, ny fiarovana ny valan-javaboahary ary indrindra ny asa fampandrosoana tanterahina eny amin’ny faritra arovana. Izany dia ho fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena mikasika ny tahirim-bola natokana ho an’ny zavaboahary sy ny fametrahana rafitra mikasika ny fitsinjovana ny tontolo iainana sy ny sosialy.
Momba ny FAPBM
Naorina ny taona 2005, ny FAPBM dia tahirim-bola tsy miankina malagasy izay natao hanohana maharitra ny Vondron’ny Faritra Arovana eto Madagasikara (SAPM).
Ny traikefa ananany amin’ny famatsiana vola ny faritra arovana, ny fahaizany mitantana, ny vokatra maharitra hateraky ny fanohanany ary ny fiantraika maharitra ny asa sahaniny, no nahazahoany ny fahatokisan’ireo mpamatsy vola azy (anisan’izany ny Banky ho an’ny Fampandrosoana Alemanina KFW, ny Sampana frantsay ho an'ny fampandrosoana AFD, Conservation International, WWF, ny Banky Iraisam-pirenena ary ny Fanjakana malagasy).
 En référence à la publication Facebook de Madame la ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina du 23 mai 2020
 Coronavirus - Malagasy tourism sector loses 1.9 trillion ariary